Ezigbo Ezigbo Anya Na-eweta Afọ Ojuju Ndị Ahịa | Martech Zone
Kemgbe afọ ole na ole gara aga, arụrụ m ọrụ na mpaghara mmalite teknụzụ nrụgide. Ihe abụọ na-eme n'ezie na mmalite bụ enweghị atụmanya ezi uche dị na usoro ahịa na azụmaahịa yana ịchụpụ maka atụmatụ ọhụrụ dị mkpa maka atụmanya. Nchikota ihe egwu abuo a puru imebi ulo oru gi ma oburu na i dozighi ha ndị ahịa tụkwasịrị gị obi.
Pgagharị atụmatụ maka atụmatụ iji chụpụ atụmanya na-esote ebe atụghị anya ihe ndị ahịa gị ugbu a bụ egwuregwu dị egwu. Achọpụtala m ya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na ahụbeghị m ya ka ọ na-arụ ọrụ ibido mmalite na ọkwa ọzọ.
Ọ bụ ngụkọta nke afọ ojuju na njiri mara ọkwa na-aga n’ihu ga-eji amamihe wee wulite azụmahịa gị. Ga-ebugharị mmanya na ụzọ abụọ ka ị ga-aga nke ọma.
Lee ụfọdụ echiche ndị ọzọ:
Ọ bụrụ n ’arụghị ọrụ ma na - eto ngwa ngwa, igbu oge na oge iji mee ka ndị ahịa na - ewe iwe ebe atụghị anya n’ụzọ ziri ezi ga - ebelata gị, ọ bụrụ na ọ kwụsịghị gị.
Ọ bụrụ na njirimara gị enweghị, ree eziokwu, ọhụụ, onye ndu na ndị ọrụ na ụlọ ọrụ gị. Ndị ukwu nwere ike ime ka ihe ọ bụla mee.
Ekwela nkwa atụmatụ tupu ị nweta ha. Ọ dị mma ikwu okwu na azụ azụ gị, mana ịnye ụbọchị zuru ezu nke nnyefe na usoro ahịa bụ nkwa ndị a ga-ejide gị.
Ọ bụrụ na enwere ndị ahịa, kpọtụrụ ha nke ọma ma hụ na ndị ahịa gị ghọtara nsonaazụ nke ịghara imezu ibu ọrụ ha na usoro ahịa na ntinye.
Hapụ ụlọ maka njehie. Igbu oge ga-eme, ndudue ga-eme, chinchi ga-eweli isi ha jọrọ njọ. Gbaa mbọ hụ na usoro iheomume gị na-enye ohere maka ihe niile dị n’elu.
Ekwela ka ndị ahịa gị kọwaa oge gị, ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịla ọrụ n’azụ oge. Ọ ka mma ịme ya ma mee ya n’ụzọ ziri ezi karịa ịme ya emechaa n’oge maọbụ na-ezighi ezi n’oge.
Dọọ ndị ahịa gị aka na ntị ma mee ka ha buru ọrụ maka atụmanya ụgha. Enyefela nsogbu ahụ na akara mmepụta. Ọ dịghị mma ka onye ọzọ mezuo nkwa na-adịghị mma.
Zuo ihe ahia gi. Ọ dị mma ịbawanye okwu ahịa gị, mana ekwela nkwa ngwaahịa, atụmatụ, ntọhapụ, oge, ma ọ bụ ọrụ nke ị na-enweghị ike imezu.
Gwa onye ahịa ozugbo ozugbo ewepụghị ọrụ ahụ. Ọ dị mkpa na onye ahịa mara eziokwu nke ihe na-eme. Ọtụtụ oge, ndị ahịa na-achọpụta n'oge ọ bụla na ha agaghị eme ya. Dị ka ụzọ nke dominoes, nke a nwere ike ibibi ọtụtụ atụmatụ na ala nke ụlọ ọrụ gị amaghị.
Tags: Krismasmmemme ahiaAkwụkwọ Ahịaihe omume ahiaKoodu QRọgụgụmkpebiụgwọ ọrụ mmemmeụgwọ ọrụmbadamba nkume
4 Ajụjụ ịjụ Onye Nleta Weebụsaịtị gị
Sep 18, 2008 na 5:19 PM
Enweghị m ike ikwenye karịa, Douglas. Ọrụ Szymanski na Henard kwadoro post gị na onye bipụtara otu isiokwu na 2001 nke chọpụtara na n'ọnọdụ ụfọdụ atụmanya ndị ahịa nwere dị mkpa iji chọpụta afọ ojuju ha karịa arụmọrụ!